Beesha Harti daarood oo Beyco la gashey Wilaayada islaamiga ah ee jubooyinka. | Halganka Online
Beesha Harti daarood oo Beyco la gashey Wilaayada islaamiga ah ee jubooyinka.
Posted on Maarso 7, 2010 by halganka
Odayaasha iyo waxgaradka beesha Harti daarood ee gobolada jubooyinka ayaa heshiis beyco ah waxey la galeen wilaayada islaamiga ah ee jubooyinka iyadoona goobta ay ka dhaceysey beycada ay kasoo qeyb galeen Mas’uuliyiin ka tirsan Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab.
Waaliga wilaayada jubooyinka ee Shabaabul Mujaahidiin Sheekh Abuubakar Cali Aadan oo ka hadley Beycada ay la gaareen Beesha Harti wuxuu si weyn usoo dhaweeyey go’aanka ay beeshaashi ku gaartey inay u gargaarto diinta islaamka wuxuuna yiri:
“ beeshan waxey ka mid aheyd beelaha hormuudka ah horeyna way ugaleen Beyco tan lamid ah,beycadan ilaahey subxaanahu watacaalaa haka dhigo mid barakeysan Mujaahidiinta horey waxey uwadeen camalkan caamka ah oo umadda ka dhaxeeya”.
Sheekh Abuubakar Cali Aadan wuxuu xusey in beesha Harti ay balan qaadey inay garab istaagi doonto Kitaabka Allah islamarkaana ay dhexda u xiran doonto sidii Shareecada islaamka loogu maamuli lahaa deegaanada ay beesha degto ee gobolada jubooyinka.
Sidoo kale waxaa halkaasi ka Hadley Sheekh Xuseen Cali fiidow oo ah Madaxa Xafiiska Siyaasadda iyo Xiriirka gobolada ee Xarakada Mujaahiinta Alshabaab wuxuuna Sheekh Xuseen fiidow sheegey inay wadaan dadaalo ay ku doonayaan inay Mubaayaco kula galaan guud ahaan beelaha degen wilaayaadka islaamiga ah ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya.
Heshiiska ay wilaayada jubooyinka la gaartey beesha Harti ee gobolada jubooyinka ayaa waxa uu imaanaya maalmo yar kadib markii Odayaasha iyo waxgaradka beesha Cowrmale ay Mubaayaco noocaan oo kale ah ay la galeen Wilaayada islaamiga ah ee jubooyinka.
« Saraakiil Xisbul Islaam ka tirsan oo ka carooday hadal uu Sh Xasan Daahir ku Af lagaadeeyay Sh Xasan Turki oo horay Xisbiga uga tirsanaa. Wilaayada Islaamiga ah ee Sh/ hoose oo deeq gaarsiiyey dad dhawaan ku guryo beeley dab ka kacey Tuulaada Damaay ee hoostagta degmada Baraawe. »